ကျနော်တို့မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်အမေရိက, ဥရောပ, အာရှ, အာဖရိက, Oceania နှင့်ပိုပြီးဖုံးအုပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့ရန်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အထုပ်အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိစေရန်အဓိက, ကယုံကြည်စိတ်ချရသည့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို employ ။
အမိန့်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့တင်ပို့မတိုင်မီလုပ်ဆောင်ပေးရန်7ရက်ပေါင်းအထိကြာ - တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များဖယ်ထုတ်ပြီး။ ကြိမ် processing အားလပ်ရက်စဉ်အတွင်း 14 ရက်ပေါင်းအထိကြာလိမ့်မည်။
အမေရိကန်အမိန့်က e-packet ကိုကနေတဆင့်တင်ပို့မည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအမိန့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကနေပွညျ့စုံစင်တာပေါ် မူတည်. တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။
United States ကို Transit Times သတင်းစာ: 12 - 20 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
ရေကြောင်းရွှေ့ဆိုင်းစေခြင်းအလိုငှါထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ကြောင်းခွအေနမြေား (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်, အားလပ်ရက်, ရာသီဥတု, etc) ရှိပါတယ်။ အများဆုံး packages များအချိန်ပေါ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သယ်ဆောင်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါအခွအေနနှင့်နှောင့်နှေးရှိပေမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့အတိအကျပေးပို့အချိန်အာမမခံနိုင်ပါဘူး, အဆိုပါပေးပို့ကိစ္စကိုရေကြောင်းကုမ္ပဏီ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ဘယျအရာ Courier ပေးပို့သုံးစွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်မည်နည်း
အဆိုပါဆက်သားဝန်ဆောင်မှုအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွညျ့စုံစင်တာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သင်ကအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအရကြောင်းသေချာစေရန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကရင်းမြစ်ထားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Courier န်ဆောင်မှုတိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်ခြားနားသည်။ အဆိုပါဆက်သားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာထိုကဲ့သို့သောဒီတော့ထွက် Amazon နဲ့အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးမှမဆုံးရှုံးမယ်လို့မြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရှင်စျေးသက်သက်သာသာနှုန်းထားရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းရဖို့မြင့်မားသောအခွန် / ပရီမီယံပေးဆောင်ရန်မလိုပါကြောင်းဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဆုံးအပေါ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သငျသညျမျိုးစုံပစ္စည်းများကိုအဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်ကိုနေရာချလျှင်ဖွယ်ရှိတစ်ဦးထက်ပိုအထုပ်ထဲမှာတင်ပို့ခံရဖို့သွားထက်ပိုပါတယ်။ ရောက်လာရန်သင့်ပစ္စည်းများအားလုံးအတှကျအခြို့သောအချိန်ကိုခွင့်ပြုပေးပါ။
သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်ခံရရှိအပေါ်ထင်ရှားစျေးနှုန်းများခွန်အား သငျသညျအမိန့်အဘယျသို့ကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ပေမယ့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွညျ့စုံစင်တာလုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်အရာကိုအလွန်အမင်းနိမ့်စျေးနှုန်းတွေအဖြစ်အထိမ်းအမှတ်သို့မဟုတ်လုံးဝလက်ဆောင်များအဖြစ်ပစ္စည်းများ mark ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအပိုဆောင်းစွဲချက်အလွန်အဘိုးထိုက်သောများမှာအချို့သောနိုင်ငံများအဘို့အဖြစ်သင့်အဆုံးအပေါ်မြှုတ်ခံရအခွန် / ထုံးစံသွင်းကုန်လုပ်ငန်းတာဝန်များတားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာမည်သူမဆိုဖောက်သည်ကိုယ်စားအထုပ်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှအိမ်မှာသည်နှင့်သင်သည်သင်၏အနီးဆုံးစာတိုက်မှာသင့်ရဲ့ကှကျစုဆောင်းလျှင်အများအားဖြင့်, ထိုစာပို့သမားတစ်ဦးစုဆောင်းမှုစလစ်ချန်ထားမည်။
ကျွန်တော်အလွန်အမင်းကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်အားမရဖို့ကြိုတင်သငျသညျကို double စစ်ဆေးမှုများအရွယ်အစားနှင့်လိပ်စာများကိုအားပေးသော်လည်းကျနော်တို့အပြည့်အဝအမှုအရာထလာနှင့်အမှားတွေလုပ်စေနိုင်သည်နားလည်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့နေရာချကြသည်ထိုနေ့အမိန့်ကို process ။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုသင့်ရဲ့အမိန့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ASAP နှင့်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲထားရှိရန်အတတျနိုငျဆုံးလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းဘယ်ကတိတော်များကိုလုပ်မပေးနိုင်ပါ။ ပစ္စည်း (s) ကိုပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွညျ့စုံစင်တာကနေတင်ပို့ခဲ့ပြီး အကယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အမိန့်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ ထိုကိစ္စတွင်, သင်အနီးဆုံးဒေသဆိုင်ရာဂိုဒေါင်မှပစ္စည်းပေးပို့နှင့်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တစ်ဦးကိုဆုံးကို item ထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေအနီးဆုံးဒေသဆိုင်ရာဂိုဒေါင်ရှိရာထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု. !